Madaxa Militariga Sudan oo sheegay in la dhisayo xukuumad ku meel gaar ah oo gaarsiisa… – Hagaag.com
Madaxa Militariga Sudan oo sheegay in la dhisayo xukuumad ku meel gaar ah oo gaarsiisa…
Posted on 4 Juunyo 2019 by Admin in World // 0 Comments
Madaxa Golaha Militariga ee ku meel gaarka ah ee Sudan, Abdel Fattah al-Burhan ayaa sheegay in golahu uu go’aansaday inuu soo dhiso xukuumad xil gaarsiin ah, waxaa la joojiyey heshiisyadii hore ee lala galay xooggaga xorriyadda iyo isbedelka, waxaa la abaabulayaa doorashooyin ay ku dhacaan muddo sagaal bilood gudahood ah oo kor joogte ka noqon doonaan bulshada Caalamka.
Waa hadalkiisii ugu horeeyey intii laga kala dareeriyey mucaaradka halkii ay ku bannaan baxayeen, halkaasi oo la sheegay in ay ku dhimatay gacanta laamaha amniga 30 qof, Burhan ayaa sheegay in goluhu uu go’aansaday in la joojiyey wadahadaladii ay kula jireen xoogaga xorriyada iyo isbedelka, lana baabi’iyey dhammaan heshiisyadii horey u dhex maray labada dhinac.
Wuxuu ku eedeeyay Burhan xooggaga xorriyada iyo isbedelka in ay isku koobayaan hanaanka siyaasada dalka iyagoo u diidan axsaabta siyaasadeed iyo ciidamada in ay door ku lahaadaan xukunka, waxay rabaan ayuu yiri in ay xukunka isku koobaan kadibna halkaasi ka dhalato in maamulkii uu galo gacan keliya, oo ka maqnaato wadar ogol loo dhan yahay iyo wakiilnimada Shacabka iyo ku qanacsanaan guud.
Wuxuu sheegay in goluhu uu go’aansaday qabashada doorashooyin muddo sagaal bilood gudaheed oo ay kor joogteeyn doonaan bulshada caalamka iyo tan gobolka, wuxuu beeniyey in goluhu uu rajo ka qabo inuu awooda sii joogo.
“Ciidamada qalabka sida, ciidamada taageerada deg-dega ah iyo ciidamada joogtada ah xaq uma laha in ay xukumaan Sudan,” ayuu yiri Burhan.
Wuxuu carabka ku dhuujiyey in golaha militariga ay gacanta u gelin doonaan xukunka qofkii shacabka soo doorto, ma noqon doono turunturo hor taagan rabitaanka mucaaradka ee gaarisiinta nidaam dimoqraadi ah.
Madaxa golaha milateriga ayaa ballan-qaaday in la baari doono waxyaabihii ka dhacay nadiifintii jidka Nile, wuxuuna carabka ku adkeeyay in albaabbada goluhu uu u furan yahay inuu maqlo codka wadaniyiinta.
Ciidamada ammaanka ayaa si khasab ah u kala dareeriyey dibadbaxayaal hor fadhiyey xarunta militariga ee Khartoum aroortii hor ee Isniintii, taas oo keentay inay halkaasi ku dhintaan dad gaaraya 30 qof iyo boqolaal dhaawac ah.